ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက် ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ဟာအဓိကထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ် ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေး, စတိုင်, နည်းပညာ, နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီရရှိနိုင်မှသာအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ, အတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာများ, နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုအသုံးပြုပြီးအောင်မြင်သည်။ သင်စိတ်ဝင်စားကြလျှင်, ငါတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု price.Our အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားစျေးကွက်ရန်သင့်အားထိုထုတ်ကုန်များကိုအာမခံချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်လွတ်မြောက်ပါကနိုင်ငံအတော်များများမှဖောက်သည်များကတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
ဖောက်သည် '' စိတ်ကျေနပ်မှုခရီးဦးကြိုပြုခြင်း။
ပုံစံ - OPT-FW1000
ဂဟေဆော်ခေါင်းတွင်မော်တာကိုအသုံးပြုသည်-မောင်းနှင်သော X နှင့် Y ဝင်ရိုးတုန်ခါနေသောမှန်ဘီလူးများ,၎င်းတွင်အမျိုးမျိုးသောလွှဲပုံစံများရှိပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်,ပိုကြီးသောဂဟေဆော်သည့်နေရာနှင့်အခြားအပြောင်းအလဲလုပ်ရန်သတ်မှတ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဂဟေအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်.
ဖုန်မှုန့်များနှင့် splash အကြွင်းအကျန်များညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်လေထုကုလားကာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်.
အကာအကွယ်မှန်ဘီလူးတွင်အံဆွဲဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးအစားထိုးရန်လွယ်ကူသည်.QBH connector laser အမျိုးမျိုးကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်.
ဖိုင်ဘာ optical အရှည်:၁၀၈၀±5nm
ချိန်ညှိနိုင်သောလေဆာကွက်:0.၃ မှ ၅ မီလီမီတာ
ဦး ခေါင်းကိုဂဟေဆော်:ND24 Wobble ဂဟေခေါင်း
ရေအေးစက်:KELIDA သည် dual temperature dual controller ပါ ၀ င်သည်
ပါဝါလိုအပ်သည်:380V ဖြစ်သည်±10%/50Hz ဖြစ်သည်
Servo မော်တာ:XYZ ဝင်ရိုးနှင့် Panasonic
Rotary ကိရိယာ:မော်တာ reducer နှင့်အတူ 100mm အချင်း rotary device ကို
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေစက်အမျိုးမျိုးသောသတ္တု workpiece ဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်,က’s စွယ်စုံ သုံး၍ အချိတ်အဆက်ရှိသောဂဟေဆော်သူများအတွက်သင့်တော်သည်,မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ(အလတ်စားပန်းကန်,အခွံမာသီး),ပါဝါဘက်ထရီ,hardware ပိုင်း,မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ပုံအစိတ်အပိုင်းများ,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ,တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများစသည်တို့.က’ကြေးနီကဲ့သို့သတ္တုပြားအမျိုးမျိုးကိုအဆက်မပြတ်ဂဟေဆော်ရာတွင်အဓိကအားဖြင့် s ကိုသုံးသည်,အလူမီနီယံ,တိုက်တေနီယမ်,အစွန်းခံသံမဏိ,ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိ,စသည်တို့.
ကြာမြင့်ချိန်:ခန့်မှန်းချက် 3-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာ
ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/fiber-laser-welding-machine.html
အကောင်းဆုံး ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
အလိုအလျောက်စက်ဤစက်သည်ဘေးတိုက်ကြိတ်ခွဲသကဲ့သို့ဖြစ်သည်,brake pad ပေါ်တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတွင်းကြိတ်ခြင်း.အော်ပရေတာသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ရာနေရာထဲသို့တွန်းထည့်သည်,ထို့နောက်၎င်းတို့အားနှစ်ဖက်စလုံးကိုကြိတ်ရန်နှင့်ဖြတ်ရန်၎င်းတို့အားအလိုအလျောက်တွန်းပို့ရန်ကိရိယာများကိုသုံးသည်.နောက်ဆုံးတော့,၎င်းတို့ကိုအလိုအလျောက်လက်မောင်းတစ်ခုဖြင့်ကောက်ယူပြီးကုန်ချောကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးကြိတ်ခွဲရန်အတွင်းအချင်းပေါ်တွင်တင်ထားသည်. သတ်မှတ်ချက်: stacking အစာကျွေးခြင်းယန္တရား:2 ယူနစ် နှစ်ဖက်စလုံးကိုကြိတ်ယန္တရား:2 ယူနစ် ကိန်းရှင်-ကြိမ်နှုန်း Drive:Shihlin AC Drive ခေါင်းကြိတ်စက်: Ø60 မီလီမီတာ,တီ:၅၀ မီလီမီတာ ဖြတ်-ယန္တရားပယ်:၁ ယူနစ် အလိုအလျောက်လက်မောင်းလွှဲပြောင်းမှုယန္တရား:၁ ယူနစ် မော်တော်:မက်စ်.၃၄၁၀ rpm/မိ အတွင်းအချင်းကြိတ်ယန္တရား:၁ ယူနစ် စက်အရွယ်အစား(LxWxH):၂၆၅၀x၁၆၀၀x၁၅၀၀ မီလီမီတာ စက်အလေးချိန်:၁၁၀၀ ကီလိုဂရမ် အလိုအလျောက်ပစ္စည်းကိရိယာများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:3 ဝန်းကျင်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:သစ်သားသေတ္တာနှင့်အတူလေဟာနယ်အထုပ်
အလိုအလျောက်စက်ဤပစ္စည်းသည်3in 1 အလိုအလျောက်စက်၏အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းဖြစ်သည်,နောက်ထပ်နေရာချထားခြင်းနှင့်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိလိမ့်မည်.အော်ပရေတာသည်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရာနေရာ၌ထားသရွေ့,ကိရိယာများသည်အလိုအလျောက်ကျွေးလိမ့်မည်,ကြိတ်ပါ,တူး,ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အခြားအလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များ.လုပ်အားခကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်. စက်ဖော်ပြချက်: တူးခေါင်း တူးဖော်ပြီးနောက်အပေါ်နှင့်အောက်ဆလင်ဒါကိုပြန်လည်ရယူသည် 90 လှည့်̊ပစ္စည်းကိုယူပြီးပြီးနောက်ဆလင်ဒါ လက်ခံသူစုပ်သည် အတွင်းအချင်း feed feed ဆလင်ဒါကြိတ် အရန်စာကျွေးဘီး အပြင်ဘက်ဘီးကိုကြိတ်ပါ အရန်စာကျွေးဘီး အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်အချင်းကိုယူပါ-ဆလင်ဒါပိတ် လက်ခံသူစုပ်သည် ဘယ်နှင့်ညာသို့နေရာယူနိုင်သောဆလင်ဒါများ အလိုအလျောက်ပစ္စည်းကိရိယာများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:3 ဝန်းကျင်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:သစ်သားသေတ္တာနှင့်အတူလေဟာနယ်အထုပ်
Piston အတွက်အလိုအလျောက်စစ်ဆေးသည့်စက်PC အခြေခံထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အမြင်အာရုံပုံရိပ်အလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်တို့ကိုပေါင်းစည်းပြီးအစီအရီချိတ်ဆက်ထားသည်,ရည်စူးထားသောအေဂျင်စီမှတဆင့်အရာဝတ္ထု၏အသွင်အပြင်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးခြင်း,NG ထုတ်ကုန်များကိုထောက်လှမ်းနိုင်သည်,စစ်ဆေးမှုလွဲချော်သောလူအင်အားနှုန်းကိုလျှော့ချပါ,ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ပါ. စက်ဖော်ပြချက်: ကုန်ပစ္စည်းတင်သောသင်ခန်းစာ တိကျသောအီလက်ထရောနစ်စကေး Rotary အညွှန်းကိန်းပန်းကန် ထုတ်ကုန်အရံပစ္စည်းမှန်ဘီလူးထောက်လှမ်းခြင်း NG ထုတ်ကုန်များထုတ်လွှတ်မှုအားစစ်ဆေးခြင်း ကုန်ချောစုဆောင်းခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းသင်ခန်းစာ စက်အရွယ်အစား(LxWxH):၁၇၀၀x၁၅၀၀x၂၀၀၀ မီလီမီတာ အလိုအလျောက်ပစ္စည်းကိရိယာများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:3 ဝန်းကျင်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:သစ်သားသေတ္တာနှင့်အတူလေဟာနယ်အထုပ်
အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်စက်ထူးခြားချက်: အထူးဂဟေဆော်ဆော့ဝဲသုံးခြင်း,၎င်းသည်ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးရိုးရှင်းသော software လည်ပတ်မှုရှိသည်,ရှုပ်ထွေးသောထုတ်ကုန်များအတွက်ကြီးမားသောလေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်,welding မြန်သည်,အလိုအလျောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု. ဂဟေဆက်ကြိုး,တည့်တည့်,ပတ်ပတ်လည်,ဘဲဥပုံ,square နှင့်အခြားလေယာဉ်များထင်သလိုမလာဘူး. လက်လှမ်းမမှီသောအစိတ်အပိုင်းများဂဟေဆော်သည်,မလုပ်နိုင်ဘူး-အဆက်အသွယ်ရှည်-အကွာအဝေးဂဟေဆော်,ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူ. သတ်မှတ်ချက်: လေဆာပါဝါ:500W လေဆာအမျိုးအစား:YAG လေဆာလှိုင်းအလျား:1064nm စွမ်းအင်:160J သွေးခုန်နှုန်းအကျယ်:0.1-20ms ကြိမ်နှုန်း:၁-100Hz အလုပ်လုပ်ဇယား:ဝင်ရိုးနှစ်ခု/ဝင်ရိုးသုံးခု/ဝင်ရိုးလေးခု အအေးခံနည်းလမ်း:ရေအေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ:၁၆ kw ပါဝါလိုအပ်သည်:AC220±10% /AC380±10% အသားတင်အလေးချိန်:450kg စက်အတိုင်းအတာ:1420x700x1500 မီလီမီတာ သွေးခုန်နှုန်းအတွက်အခြားသတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်,ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ※ လျှောက်လွှာ:တွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါ:ပါဝါဘက်ထရီ,ဘက်ထရီအိမ်ရာ,ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကို,မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်း,စစ်ရေးထုတ်လုပ်မှု,တူရိယာ,မော်တာ,အိုင်တီမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းများ,ဆီလီကွန်သံမဏိ,အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ,လေဆာရောင်ခြည်ဖြာ,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အခြားတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဂဟေဆော်သည်. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:2 ပတ်လည်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIF သို့မဟုတ်အခြားသူများတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:သစ်သားသေတ္တာနှင့်အတူလေဟာနယ်အထုပ်